Sina BENZALKONIUM CHLORIDE orinasa sy mpanamboatra | CHEM-PHARM
Benzalkonium Chloride dia surfactant sira amonioma quaternary cationic manan-danja, izay be mpampiasa amin'ny fikarakarana manokana, shampoo, conditioner ary vokatra hafa. Izy io dia misy vokatra tsara fanoherana ny static, malefaka ary manohitra ny harafesina, ary azo ampiasaina amin'ny fanaovana sterilization, pirinty ary fandokoana fanampiny, fanasana lamba ary indostria hafa.
Fanandramana: EINECS 80% No. 205-351-5 Klôzida Benzalkonium1227 dia karazana surfactant cationic, an'ny booth nonoxidizing. Benzalkonium Chloride 1227 dia afaka mitazona tsara ny fielezana algà sy ny fiterahana. Benzalkonium Chloride 1227 koa dia manana fananana manaparitaka sy manitsaka, afaka miditra sy manala ny fotaka sy ny ahidrano, manana tombony amin'ny poizina ambany, tsy misy fanangonana poizina, mety levona anaty rano, mora ampiasaina, tsy voakasiky ny hamafin'ny rano. Benzalkonium Chloride 1227 dia azo ampiasaina ihany koa ho toy ny anti-agena, mpiady antistatika, emulsifying
mpandraharaha sy mpandraharaha fanovana amin'ny saha voatenona sy fandokoana. entana index Fisehoana hazavana mavomavo mavo mavo mavo mavo Fampiasa: Toy ny famonoan-tena tsy misy famonoana dia aleon'ny 50-100mg / L ny fatra toy ny remover sludge, 200-300mg / L no tiana kokoa, tokony ampiana agents antifoaming organosilyl sahaza an'io tanjona io. DDBAC /BKCazo ampiasaina miaraka amin'ny fungicidal hafa toy ny isothiazolinones, glutaraldegyde, dithionitrile methane ho an'ny synergisme, fa tsy azo ampiarahina amin'ny klorophenol. Raha misy ny maloto aorian'ny fanipazana ity vokatra ity amin'ny rano mangatsiaka, tokony hosivina na hatsohana ara-potoana ny maloto mba hisorohana ny fametrahana azy ireo ao ambanin'ny fanangonana tanky aorian'ny fanjavonan'ny froth.
Previous: SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 70% (SLES)
Manaraka: DICHLOROMETHANE / METHYLENE CHLORIDE